အခြားရောဂါများ Archives - Page 27 of 35 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Cataplexy Part (1)
ကာတာပလက်စီ (အပိုင်း တစ်) သူနိုးလာသည်။ သို့သော် အိပ်မည်ဟုတွေးပြီး အိပ်ပျော်သွားခြင်းမဟုတ်ခဲ့။ သူ ကုတင်ပေါ်တွင်စောင်ပါးလေးခြုံလျက်သားနိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အိပ်ပျော်သွားစဉ်က ကုတင်ပေါ်တွင်မဟုတ်ခဲ့။ သူ့နံဘေးတွင်တော့ ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့် အမျိုးအဆွေများက ဝိုင်းလျက်။ အမျိုးသမီးနှင့်သမီးငယ်က စိတ်ပူဟန်ဖြင့် ရပ်ကြည့်နေလျက်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့သူသည် အိပ်ယာမှ…
ကြို့ထိုးခြင်း ကြို့ထိုးခြင်းဆိုတာဘာလဲ ? ကြို့ထိုးခြင်း ဆိုသည်မှာ ရင်ဘတ်ပိုင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းကို ခြားပေးထားသော ကြွက်သားမကြီး အခိုက်အတန့် အလိုလျောက် ညှစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည် ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထိုကြွက်သွားမကြီးဆီသွားသည့် phrenic နာ့ဗ်ကြောသည် လှုံ့ဆော်ခံရသောအခါ ကြွက်သားများကို အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားစေတတ်ပါသည် ။ ထို…
အစာအိမ် သွေးကြောပေါက်ခြင်း အရပ်ထဲမှာ ပြောနေကြတဲ့ “မောင် ဘယ်သူကဖြင့် အရက်အသောက် လွန်လို့ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး ဆုံးသွားတယ် ၊မဘယ်သူကဖြင့် အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေ နင်းကန်သောက်ပြီး ဗိုက်အောင့်ပြီး သွေးအန်လို့ ၊ဒေါ်ကွက်လပ်ကဖြင့် အစာအိမ်ရောဂါကနေ သွေးကြောပေါက်ပြီး သွေးအန် ဝမ်းမည်းမည်းသွားလို့ ဆေးရုံတက်ကုနေရတယ်”…
နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း ဖျားနာပြီး နှာခေါင်းပိတ်၊နှာစေးတာ လူတိုင်းကြုံဖူးကြမှာပါ။သာမန် ရာသီတုပ်ကွေးကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်၊နှာစေးခြင်းရှိသလို တစ်ခြားအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း နှာခေါင်းပိတ်နိုင်ပါတယ်။သာမန် ရာသီတုပ်ကွေးဖျားနာကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်တာဆိုရင် ၁ပတ်လောက်နေရင် သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းပိတ်ရင် ညဘက်အိပ်ရတာ အဆင်မပြေတာကြောင့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ဒါလေးတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့် အုံးပါ။ ရေနွေးငွေ့ကိုရှူခြင်းကလည်း နှာခေါင်းပိတ်တာကို…
မိုးရာသီ နှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ မုတ်သုံနှင့် အတူ မိုးစက်မိုးပေါက်များက တဖွဲဖွဲကျလာကာ မိုးရာသီ ကန့်လန်ကာကြီးကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပေပြီ ။ မိုးချစ်သူများအတွက်တော့ အလွန်ပျော်ရွှင်ရချိန်ကြီးဖြစ်ပြီး အစားအသောက်များ လှိုင်လှိုင်ပေါသော ရာသီလဲ ဖြစ် လမ်းဘေးဝဲယာများတွင် ရာသီပေါ် သီးနှံများ ခေါက်ဆွဲသုပ် ကြာဇံသုပ်လို…
လည်ချောင်းနာခြင်းကို သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများ …. လည်ချောင်းနာခြင်းကို လူတိုင်းခံစားဖူးမှာပါ။နာတာတာ၊ယားကျိကျိနဲ့ တော်တော်ခံရခက်ပါတယ်။တစ်ခုခုမျိုချလိုက်ရင်လည်း ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လည်ချောင်း ဘာကြောင့်နာလဲနဲ့ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနာတာဟာ များသောအားဖြင့် ရာသီပေါ်အအေးမိ၊တုပ်ကွေးများနဲ့ တွဲတတ်လေ့ရှိပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာ ပိုများတတ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လည်ချောင်းနာခြင်းတွေကတော့ ပိုးသတ်ဆေးသောက်ဖို့ မလိုအပ်တတ်ပါဘူး။၅-၇ရက်ခန့်…
လူကြီး သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ မိုးရာသီနဲ့အတူ သွေးလွန်တုပ်ကွေး သတိပေးချက်များများ ထွက်ပေါ်လာသလို အိမ်ရှိတစ်စုံတစ်ယောက် နေမကောင်းဖြစ်လျှင်လည်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်နေမှာ စိုးရိမ်လာကြသည် ။ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ပိုမိုနာမည်ကြီးလာသလို လူနာများဘက်မှလဲ ပိုမိုစိုးရိမ် ပူပန်လာကြသည် ။ ထို့အပြင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါမှာ ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်နိုင်တာကြောင့်…
Rheumatic, Rheumatoid and SLE
လေးဘက်နာ၊အရေပြားလေးဘက်နာ နှင့် သွေးလေးဘက်နာ လေးဘက်နာရောဂါ( Rheumatic Fever) ဆိုတာ သေချာစွာ ကုသခြင်းမရှိတဲ့ Strep Throat (Streptococcus ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လည်ချောင်းနာရောဂါ)နဲ့ Scarlet Fever ရောဂါတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ ဒီရောဂါဟာ အသက် ၅နှစ်မှ ၁၅အရွယ်ထိ…